Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks]
1 Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 23rd September 2009, 11:03 am
Google Talk ကို ယခုနောက်ပိုင်း ဂျီမေးလ်ကနေ သုံးလို့ရလာပါတယ်။ အဲ့ဒီလို သုံးတဲ့အခါမှာ Invisible ဆိုတဲ့ Function
တစ်ခုပါလာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Status ကို Invisible လုပ်ထားရင် ကိုယ့်ကို ဂျီတော့မှာ သူများက offline အနေနဲ့ပဲတွေ့နေရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဂျီမေးလ် ရဲ့ Google Talk ကလေးကနေပြီးတော့ သူများတွေကို online ဖြစ်နေလား offline ဖြစ်နေလား
အကယ်၍ သင်ကော ကိုယ့်ရဲ့ GTalk က လူတယောက်ကို offline အနေနဲ့ တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီ့လူ တကယ် offline ဖြစ်မဖြစ်ကို
သိချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဒါဆို စစ်တဲ့ နည်းလေးရှိပါတယ်။ offline အစစ်လား၊ offline အတုလား သိချင်ရင် ဒီလိုလေးလုပ်ပါ။
(၂) Send voicemail ရယ် Call ရယ် စတဲ့ ခလုပ်တွေဘေးနားက အောက်ဘက်ညွှန်ပြနေတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Go off the record
(၄) [You must be registered and logged in to see this link.] is offline and can't receive messages right now. လို့ ပေါ်လာခဲ့ရင် သူတကယ် offline
ဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်လို့ ဘာမှ မပေါ်လာရင် သူ Invisible လုပ်ထားတာပါ။
(၅) စစ်ပြီးသွားရင် "Stop chatting off the record" ကို ပြန်နှိပ်ပေးပါ။ သို့မှသာ နောက်ပိုင်း သူနဲ့ ချက်ရင် Gmail မှာ သူနဲ့ နောက်ပိုင်း
ချက်တာတွေကို Chat section မှာ ဂျီမေးလ်ကနေ ပြန်ကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 23rd September 2009, 6:52 pm
နောက်လည်းထပ်ပြီး share ပေးပါဦးနော်
3 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 24th September 2009, 1:50 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-08
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 18
oh now i can see whether my friends lie me or not ..
thanks ma naw
4 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 24th September 2009, 3:47 pm
G Talk invisible
ကဲဗျာ .. G TAlk မှာ invisible လုပ်ချင်သူများအတွက် ဆိုရင် ဒေါင်းလိုက်ပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
သူက Gmail ထဲ ၀င်စရာမလိုပါဘူး .. [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 25th September 2009, 10:08 am
Thank to you are comment reply.
6 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 26th September 2009, 6:30 pm
နေရိုင်း wrote: G Talk invisible
ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ...ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့ကောင်က Con မကောင်းရင် ကျကျသွားသလိုပဲနော်..အဲ့ဒီ့ထက်ကောင်းတာလေးရှိရင်လည်း မစပါဦးဗျာ...
7 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 26th September 2009, 10:54 pm
အဟဲ ဟုတ်တယ်ဗျာ .. သူက နည်းနည်း လိုင်းပေါ်မူတည်တယ် .. နောက် တွေ့ ရင် ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 28th September 2009, 2:15 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-10
အခုလို ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်။
9 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 28th September 2009, 3:09 pm
block လုပ်ထားလား ၊ မလုပ်ထားဘူးဆိုတာရော မသိချင်ကြဘူးလား [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ သိချင်ကြရင် ၊ offline ဖြစ်
နေတဲ့ account တစ်ခုကို voice mail send ကြည့်လိုက် ၊ voice mail send လို့မရဘူး ၊ ချက်ချင်း
ပြန်ကျသွားတယ်ဆိုရင် သေချာပြီ ၊ အဲဒါ ဆိုရင် အဲဒီလူက လူကြီးမင်းတို့ကို block လုပ်ထားလို့ပါ ၊ ချက်
ချင်းသာ ပြဿနာသွားရှာလိုက်တော့နော် ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 28th September 2009, 3:46 pm
Thank to [You must be registered and logged in to see this link.]. All ok [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 28th September 2009, 7:39 pm
ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာတော့ voidmail send ဆိုတာမပေါ်ဘူးဗျ
email ဆိုတာပေါ်ပြီတော့ go off the record and block....
12 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 29th September 2009, 12:26 am
တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီ ၊ အစ်ကိုပြောပုံအရဆို ၊ အစ်ကိုက chat box ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ down arrow ပုံစံလေးထဲမှာသွားရှာတယ်ထင်တယ် ။ ကျွန်တော်ပြောတာက
offline ဖြစ်နေတဲ့ account တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ရင် call ဆိုတာရယ် ၊ send voicemail ဆိုတာရယ် နှစ်ခုပဲပေါ်နေလိမ့်မယ် ၊ အဲဒီနှစ်ခုထဲက send voicemail ဆိုတာကိုပြော
တာလေ။ မရရင်ပြန်ပြောပါအစ်ကို ။
13 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 29th September 2009, 7:19 pm
offline ဖြစ်နေတဲ့ account တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ရင် call ဆိုတာရယ် ၊ send voicemail ဆိုတာရယ် နှစ်ခုပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်မှာတော့ email တစ်ခုပဲပေါ်ပါတယ်အစ်ကိုရေ
14 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 29th September 2009, 9:32 pm
ဖြစ်နိူင်မယ်ဆိုရင် screen shot လေးနဲ့ပြပေးပါလား အစ်ကို ။
15 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 30th September 2009, 6:52 pm
16 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 30th September 2009, 7:43 pm
မြိတ်အလုပ်သမားလေး wrote: ဒီလိုလေးအစ်ကိုရေ
အစ်ကိုရဲ့ chat box ကို length ကိုချဲ့ကြည့်ပါအုံးအစ်ကို ၊ length ကကျဉ်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာတွေ မပေါ်တာလားလို့ ။ ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံးအစ်ကို ။
17 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 9th November 2009, 10:50 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-09
မဟုတ်ဘူးဗျ အဲ့ဒါ gtalk version မတူလို့ ဖြစ်တာပါ။
ပြောင်းတင်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ တချက်လောက် အကြောင်းပြန်ပေးပါနော်
နောက်ထွက်တဲ့ version တွေမှာအရင် ကဟာနဲ့ နည်းနည်းကွဲသွားပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် version အဟောင်းကို ပြန်ရှာတင်လိုက်ရင် အိုကေသွားပါပြီ။
18 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 11th December 2009, 9:20 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-11
အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
19 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 12th December 2009, 8:44 pm
20 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 16th July 2010, 10:50 pm
N@Y Y!N3 wrote: G Talk invisible
အကိုရေ လင့်လေး သေနေလို့ ပြန်တင်ပေးလို့ ရရင် ပြန်တင်ပေးပါဦး အကိုရေ
21 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 17th July 2010, 12:14 pm
22 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 20th July 2010, 6:14 pm
တညျနရော : မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့ အောက်တစ်နေရာ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-20
အစ်ကိုတော်ရေ လင့် လေးကအလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ.
ပြန်တင်လို့ ရရင်တင်ပေးပါနော် .......
စောင့် မျှော်နေပါ့ မယ်....... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
23 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks] on 20th July 2010, 6:23 pm
အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ........ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
24 Re: Invisible လုပ်ထားရင် ... [Tips & Tricks]